Njengomhlinzeki wesevisi, sinesibopho sokuqukethwe kwethu kulawa makhasi ngokuhambisana nomthetho ojwayelekile ngokuya ngeSigaba 7, Isigaba 1 se-German Telemedia Act. Ngokuya nge-§§ 8 kuya ku-10 TMG, njengomhlinzeki wesevisi, asiphoqelekile ukuqapha imininingwane ehanjisiwe noma egcinwe evela eceleni noma ukuphenya ngezimo ezibonisa umsebenzi ongekho emthethweni. Izibopho zokususa noma ukuvimba ukusetshenziswa kolwazi ngaphansi komthetho jikelele zihlala zingathinteki. Isibopho kule ndaba singenzeka kuphela kusukela ngesikhathi lapho sazi khona ukwephulwa komthetho okuthile. Ngokushesha lapho sazi ukwephulwa komthetho okunjalo, sizokususa lokhu okuqukethwe ngokushesha.
Ukunikezwa kwethu kuqukethe izixhumanisi zamawebhusayithi angaphandle avela kokuqukethwe esingenawo umthelela kokuqukethwe kwawo. Ngakho-ke asikwazi ukwamukela noma yisiphi isikweletu salokhu okuqukethwe kwangaphandle. Umhlinzeki ofanele noma opharetha wamakhasi uhlala enesibopho sokuqukethwe kwamakhasi axhunyiwe. Amakhasi ahlanganisiwe ahlolwe ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona ukwephulwa komthetho ngesikhathi exhunywe ngaso. Akukho okuqukethwe okungekho emthethweni okutholwe ngesikhathi kwenziwa isixhumanisi. Kodwa-ke, ukuqashwa unomphela kokuqukethwe kwamakhasi axhunyiwe akunangqondo ngaphandle kobufakazi obuphathekayo bokuphulwa komthetho. Uma sazi ukwephulwa komthetho, sizosusa lezo zixhumanisi ngokushesha.
Okuqukethwe kanye nokusebenza kulawa makhasi adalwe ngumhlinzeki wewebhusayithi kungaphansi komthetho we-copyright waseJalimane. Ukuphinda, ukucubungula, ukusabalalisa kanye nanoma yiluphi uhlobo lokuxhashazwa ngaphandle kwemikhawulo yomthetho we-copyright kudinga imvume ebhaliwe yombhali noma umdali ofanele. Ukulanda namakhophi ale webhusayithi kuvunyelwe kuphela ukusetshenziswa kwangasese, okungezona ezentengiso. Ngokuqukethwe kokuqukethwe kwaleli sayithi akudalwanga yi-opharetha, ama-copyright wabantu besithathu ayabonwa. Okuqukethwe ikakhulukazi kwabantu besithathu kumakwe kanjalo. Uma kwenzeka wazi noma yikuphi ukwephulwa kwe-copyright, sizokucela ukuthi usazise ngokufanele. Ngokushesha lapho sazi ukwephulwa komthetho, sizokususa lokho okuqukethwe ngokushesha.